Thwebula Mobdro 2.1.86 – Vessoft
Isigaba: Ividiyo yokusakaza
Ikhasi elisemthethweni: Mobdro
Mobdro – a isofthiwe ukubuka ukusakazwa video evela emhlabeni wonke. Isofthiwe uthola popular kwevidiyo ngezihloko ezahlukene ezivela emhlabeni internet. Mobdro uhlongoza ukubukela izindaba, ezemidlalo, umculo, imidlalo, ubuchwepheshe kanye nezinye izigaba wonke yezokusakaza video. Isofthiwe uyakwazi ukuthola imifudlana ividiyo ngezilimi akhethwe umsebenzisi. Futhi Mobdro kwenza ukuhlunga ukusakazwa alfabhethi futhi kuvimbela ukufinyelela ngokusebenzisa module sabazali. Isofthiwe has a esibonakalayo elula futhi kulula ukuyisebenzisa.
ukusakaza Video emhlabeni wonke
Tifundvo letehlukene kokusakazwa ividiyo
Ukukhethwa video nemifudlana at lulwimi lolufanele
Ukugawulwa umlando wosesho
Amazwana ku Mobdro
Mobdro software ehlobene
Ithuluzi ukubuka futhi isakaze isiqophi ukusakaza. Isofthiwe kwenza ukugunyaza futhi sokubhala imibono noma adale okhethweni.
I-Chromecast – isoftware yokulawula idivaysi ye-Chromecast. Isoftware inika amandla ukusakaza okuqukethwe kwabezindaba kusuka kukhompyutha ye-smartphone noma yethebhulethi ukuya kwi-HD-TV.
I-Firefox – omunye wabaholi beziphequluli ezihamba phambili emhlabeni ngokwesekwa ubuchwepheshe besimanje. Isoftware ihlinzeka ngokuhlala ngokunethezeka kwi-inthanethi futhi isekela ukuxhumana kokunye okufakiwe.
Isofthiwe ukuphatha ibhokisi leposi kusukela Yahoo service. Isicelo intuitively ihambisa imiyalezo engenayo zigaba ezahlukene ukubukwa esikahle.
Mamba – imenenja elula yokujwayelana nokuxhumana. Uhlelo lokusebenza livumela ukubuka amaphrofayli omsebenzisi, hlela imininingwane yomuntu siqu bese unikeza izipho ezibonakalayo.
Iqembu le-FIFA 15 Ultimate – iqembu lebhola lezinyawo elinabadlali abaningi abadumile bebhola, amaqembu kanye nezilimi zebhola. Umdlalo usebenzisa ihluzo ezisezingeni eliphakeme kanye nokunyakaza kwamaqiniso kwabadlali.
I-Lucky Patcher – isoftware yakhelwe ukususa ukuqinisekiswa kwelayisense, ukukhangisa kwe-block, ukuguqula izimvume nokumisa iziqalo zezinhlelo zokusebenza ezifakwe kwi-smartphone.